Izindaba - Imikhiqizo Nezinsiza Zokwezifiso zeMarathon
Uma kukhulunywa ngemizamo yokusiza kanye nemicimbi, ama-marathoni aphakathi kwezinketho ezinhle kakhulu laphaya. I-marathon ivumela abagijimi ukuthi babonise amandla abo, amandla abo nokuzinikela kwabo esizeni sabo noma abaxhasi abazikhethelayo ngemikhiqizo ye-marathon yangokwezifiso. Akukho lutho olufana nosuku olunamandla lokuzivocavoca ukukhuthaza abantu ukuthi banikele futhi abantu abaningi ngokwengeziwe bazibandakanye; noma ngabe kungenxa yenkazimulo, ukubamba iqhaza noma nethuba lokuwina ngemuva kwezinyanga noma iminyaka yoqeqesho.
Njengoba ama-marathoni aphethe imizwa enamandla kangako kubantu abaningi, futhi ngamakhulu ezinkulungwane zabagijimi abangena emicimbini minyaka yonke, akukaze kube nesikhathi esingcono sokukhuphula isikhalazo sakho sokubuka siye ezingeni elilandelayo. Kubahleli be-marathon, ukuphuma esixukwini kuya ngokuya kuba nzima; kepha kukhona okuningi okungenziwa ukwenza umkhiqizo wakho ubonakale ngokushesha maqondana neminye imicimbi laphaya. Enye indlela enhle yokuqala ngukutshala imali ezembatho ezenziwe ngezifiso zesizini yemarathon yasehlobo, kusuka ezikibheni ezingokwezifiso ukuklama izinketho zakho ze-hoodie.
Sihloniphekile ukusebenzisana nenhlangano ye-Imbube Marathon, ukuhlinzeka ngochungechunge lwezesekeli zemicimbi nge-shirt, i-hoodi, i-polo shirt, umfaniswano wonompempe, indondo, ithawula lemarathon, amasokisi, izigqoko, indebe, ibhande lesandla lesilicone, isibhengezo, amafulegi eqoqo, ukugoqwa kocingo njll.
About Imbube Marathon: His His Lord, King Mswati III had the vision of a world class, long distance running event for The Kingdom of Eswatini. Isikhwama Sikazwelonke Sokuhlinzeka Eswatini, ngokuhlanganyela nabaxhasi abakhulu bemicimbi iStandard Bank Eswatini bayaziqhenya ngokukwazi ukusingatha lo mcimbi ohlonishwa njalo ngeSonto lokuqala ngo-Okthoba (6th October 2019).
Ngabe ucabanga ukutshala imali kwizikibha ngokwezifiso noma izesekeli zeMarathon yakho ezayo? Ngemuva kwalokho Yakha Ingubo Yakho iyinsizakalo yakho. Dala okokugqoka okwenziwe ngezifiso nezinsiza ezihambisana ngokuphelele nomkhiqizo womcimbi wakho, ngaphandle kwamandla. Akunasidingo sezinqubo eziyinkimbinkimbi, ukujika okude noma izinhlelo ezididayo. Ukucela ikhotheshini yezinsizakalo zethu, thintana nathi manje.